အကြောင်းရင်းက စိတ်တွင်းမှာ | မေတ္တာရိပ်
← အခက်အခဲနှင့် ဘ၀
သင်ဆဲတာကို ငါဘုရားမယူ →
အကြောင်းရင်းက စိတ်တွင်းမှာ	Posted on March 25, 2013	by mettayate တရားအားထုတ်ခြင်းအားဖြင့် စိတ်တည်ငြိမ်မှု အေးချမ်းမှု ရင့်ကျက်မှု ရလာမယ်။
၀ိပဿနာဉာဏ်တွေ ရင့်ကျက်လာတဲ့အခါ ဒုက္ခနဲ့ကြုံတဲ့အခါ စိတ်ဆင်းရဲမှု သိပ်မဖြစ်တော့ဘူး။
ခန္ဓာကိုယ်ဆင်းရဲမှုတွေလည်းရှိမယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း အဆင်မပြေမှုတွေ ရှိမှာပဲနော်။
အဲလိုအဆင်မပြေမှုတွေရှိသော်လည်းပဲ စိတ်ထဲမှာ လွန်လွန်ကဲကဲ ပင်ပန်းမှု ဆင်းရဲမှု မဖြစ်အောင် နေတတ်ရင်ရတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ဗုဒ္ဓက နကုလပိတာ “အာတုရ ကာယဿ မေ သတော၊ စိတ္တံ အ မေ နာတုရံ ဘ၀ိဿတ။” ကိုယ်မှာပင် နာကျင်နေသော်လည်း စိတ်မှာ မနာကျင်အောင် နေရမယ်။”
လောကဓံတရားနဲ့ကြုံတဲ့အခါ ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲသွားမယ်။ စိတ်ဆိုးသွားတယ်။ မုန်းသွားတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာ သတိရှိဖို့ လိုအပ်တယ်။ အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံထဲက အသိဉာဏ်ကိုထုတ်ယူရမယ်။
အသိဉာဏ်ထုတ်ယူတဲ့အခါမှာ သူဘာကြောင့်မှားသွားတာလဲ ဆိုတာထက် ကိုယ်ဘာမှားသွားတာလဲဆိုတာ ပထမဦးဆုံး အရေးကြီးသိဖို့လိုပါတယ်။
ကိုယ်ဘာကြောင့် စိတ်ဆင်းရဲသွားတာလဲ။ ငါစိတ်ဆင်းရဲတဲံအကြောင်းဟာ ငါ့အတွင်းမှာ ရှိနေတယ်။ အဲ့ဒီလိုမြင်အောင် ကြည့်ရမယ်။ အဲ့ဒီလိုမြင်သွားရင် ကိုယ့်အတွက် အကျိုးများဆုံးပဲ။ နောက်မှ သူဘာမှားသွားလည်းဆိုတာကို ကြည့်ပါ။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အဆင်မပြေမှုဆိုတာ ဖြစ်ရိုးထုံးစံပါ။
လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အဆင်မပြေ ဖြစ်တိုင်း ဖြစ်တိုင်း ကိုယ့်လောကကြီးက နဲနဲကျဉ်းသွားတယ်။
လူတစ်ယောက်ကို ကိုယ့်လောကထဲက ထုတ်ပစ်လိုက်တိုင်း ပစ်လိုက်တိုင်း ကိုယ့်ဘ၀ဟာ ကြာလေ ကျဉ်းလေ ကျဉ်းလေ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။
ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ကို ပိုကောင်းအောင် လုပ်ချင်တယ်။
ပင်ပန်းတာလည်းသက်သာစေချင်တယ်ဆိုရင် စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင် အေးချမ်းအောင် လေ့ကျင့်ပြီးတောင် အလုပ်လုပ်တိုင်းမှာ တခြားစိတ်ပင်ပန်းစရာမတွေးဘဲနဲ့ အလုပ်ကို အာရုံစူးစိုက်ပြီးလုပ်တဲ့ အကျင့်ကိုလုပ်ပါ။
ကိုယ့်လုပ်တဲ့ အလုပ်ကိုအကောင်းဆုံးစိတ်ထား အကောင်းဆုံးအရည်အချင်းနဲ့ လုပ်နိုင်အောင်၊ ကိုယ့်စိတ်ကို တည်ငြိမ်အောင် အေးချမ်းအောင် စိတ်ချမ်းသာနေအောင် သတိနဲ့နေတဲ့အလေ့အကျင့်ကို အချိန်မရွေး နေရာမရွေး လုပ်သင့်တယ်။ ရေရှည်မှာ ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ဟာ ကိုယ့်ဘ၀ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးပါတယ်။
အလုပ်လုပ်လို့ ပင်ပန်းတာထက် ဆက်ဆံရေး အဆင်မပြေလို့ စိတ်ပင်ပန်းတာ ပိုဆိုးတယ်။
This entry was posted in ဆုံးမသြ၀ါဒများ. Bookmark the permalink.	← အခက်အခဲနှင့် ဘဝ